Update သတင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Update သတင်းများ
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 2, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity | 11 comments
တရုပ်နိုင်ငံမှ အမ်အိုင်၁ရ ဒုံးကျည်တပ် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ငါးစီး ဝယ်ယူထားသည်ဆိုသောသတင်း မမှန်ကြောင်း ဝတပ်မဒေါ် လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးမုံဂျီး ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီးနောက် ဝစစ်တပ် ဒုံးပျံတပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် ကဝေအောင်မှ ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်မှ ပစ်လွှတ်ခဲ့သော ကိုလံဘီယာ အာကာသလွန်းပျံယာဉ် ပျက်ကျခဲ့ရမှုသည် ၎င်းတို့လက်ချက် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
ဝတပ်ဖွဲ့သုံး တရုတ်ပြည်လုပ် စစ်ကက်လီကော်ပတာ
ဧပြီ၃ဝရက်နေ့ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာသို့ လာရောက်သော မီးသတ်ကားများအား ဦးစားပေးလမ်းရှင်းပေးသော ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့် ယဉ်ထိန်းရဲများအား တဖက်ယဉ်ကြောတွင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည့် ပြည်ထဲရေး ဒုဝံကျီး ရဲဂျုတ် ကျော်ကျော်ထွန်း ဂဒေါ် ကြိမ်းမောင်း ဆဲဆိုခဲ့သည်။ ရဲဂျုတ်မှ ထိုဖြစ်ရပ်အပေါ် ဒေါကီးသွားပြီး သူ့မိန်းမအား တုတ်ကြီးကြီးဖြင့် ရိုက်မည်ဟု ကြိမ်းဝါးပြောဆိုကာ ရုံးစောစောဆင်းကြောင်း ထိုနေ့က ၎င်းထံသို့ အေဘီစီ စတောက်ဘီယာ၊ ကြက်ဥ၊ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ပို့ပေးခဲ့ရသူတဦးမှဆိုသည်။
လက်ပံတောင်း ဝမ်ပေါင်စီမံကိန်း ထွန်တုံးတိုက်ပွဲအပြီး ရက်ပိုင်းလေးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲနှင့် ပတ်သက်သော အမှုနှစ်မှု တိုးလာခဲ့ရာ ပထမအမှုတွင် လယ်သမားများအား ဦးဆောင်သည်ဆိုသော လူရှစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်တမှုမှာ ကွန်ပြူတာစာစီစာရိုက်ဆိုင်တခုမှ ပရင်တာထုတ်ခနှင့် မိတ္တူဆွဲခ ရဲအဖွဲ့ထံမှ ရလိုမှုတို့ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးကဏ္ဍ အဆင့်မှီရန် အောက်ခြေမှစ ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးသုတေသီများ၏ အကြံပြုများအပေါ် အလေးထား တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ပညာရေးဝံကျီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းများတွင် မူလတန်းမှစ၍ ယောက်ျာလေးများ ထိုင်ထလုပ်၊ မိန်းခလးများ ကြက်ဖခွပ်တမ်း ဆော့ကစား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခုံဖိနပ်များ ပေးဝေရေးကိုမူ သစ်တောပြုန်းတီးမှု မဖြစ်စေရန် ရပ်တန့်ထားရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယနေ့ Update သတင်းများမှာ…
အထက်ပါပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း မန်းဂဇက်ရွာမှ ဦးကြောင်ကြီးအား…
ဝ တပ်မဒေါ် လေတပ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးမုံဂျီးမှ အရေခွံဆုတ်ပြီး…
ဝ တပ်ဖွဲ့သုံး တရုတ်ပြည်လုပ် စစ်ကက်လီကော်ပတာ အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်ဂျောင်း…
နောက်နေ ့သတင်းစာမဝယ်တော ့ဘူး
သတင်းထက် သတင်းဓာတ်ပုံကို ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဒီသတင်းစာပဲစောင့်ဖတ်တော့မယ်။ “ဝတပ်ဖွဲ့သုံး တရုတ်ပြည်လုပ် စစ်ကက်လီကော်ပတာ” ကိုတော့ ခိုက်သွားဘာဂျောင်း။ ကြေးမုံတို့လက်စွမ်းထက်ချက်ဂဒေါ့ အူးကျောင်ဒို့ အပြူးပြောင်ရဒေါ့ဒါဘာဘဲလား။
အဲ့သည် လိင်ဗျံကိစ္စက ကျုပ်အထင် ဝါ့တွေ အဗျင်းခံရဘို့ အကွက်ဆင်ခံရသလါးဘဲ
ဗမာစစ်အုပ်စုတွေက လက်နက်ကြီးကြီးတွေရှိတယ်လေ သေခြာသုံးရသေးတာမဟုတ်ဘူး
သူ့ဆီမှာ ကောက်ညှင်းကျဉ်တောက်လောက်ရှိတဲ့ အမြောက်ရှိမှ
ကိုယ်က ဝါးပိုးဝါးလောက်ရှိနဲ့ အမြောက်နဲ့ထုလို့ရမှာ
ဆိုခြင်တာက သူတို့မှာ ဟာလီကော်ပတာရှိလို့ ဒို့က ဂျက်လိင်ဗျံနဲ့ ချရမယ် ဆိုတဲ့သဘောဘဲ
ဝါ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဘဂျီးဖေါတစ်ယောက်တော့ ဝါ့တွေမှာ လိင်ဗျံရှိတယ်သဒင်းကြားလို့
နာသိတာတော့ တရုတ်က ရောင်းထားတဲ့ (နှစ်စီးဝယ်ရင် တစ်စီးလက်ဆောင်ဆိုတဲ့) ဗုံးကျဲ ဂျက်လေယာဉ်တွေက တစ်ခါမှ စမ်းမသုံးရသေးဘူးဆိုပဲ….။ အဲဒါတွေ စမ်းသပ်လို့ရအောင် တရုပ်က စေသနာနဲ့ ဝကို ရဟတ်ယာဉ်ပေးလိုက်ပုံရတယ်….။
မနေ ့တုန်းက အမတ က ဒုမှူး မင်ဂါဆောင်မှာ မေးကြည့်မိတာကတော့
အမေဒစ်ကန်ကြောင် ဆီ ချိန်ထားတယ် ဆိုကလားပဲ
ဦးကြောင်တစ်ယောက် ကတ်လီကော်ပတာ ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ
နောက် သတင်းတစ်ခု ဦးကြောင် မသိလိုက်ဘူးလား
စီဒိုးနား ရှေ့ကအခြောက်တွေ ဝိုင်းဆွဲတာကျွတ်သွားတယ်တဲ့